Dream League Soccer 2019 6.00 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.00 လြန္ခဲ့ေသာ6လက
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား Dream League Soccer 2019
Dream League Soccer 2019 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုရာသီအတွက်အဆင်သင့် Get - အိပ်မက်လိဂ်ဘောလုံး 2019 ကဒီမှာပါ! ဘောလုံးကျနော်တို့ကပြောင်းလဲသွားပြီကိုသိ, ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအသင်းကိုတည်ဆောက်ရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သကဲ့သို့။ အစစ်အမှန် FIFPro ™လိုင်စင်ရစူပါစတားစုဆောင်း, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားကစားကွင်းတည်ဆောက်, သင်ဘောလုံး Stardom ရန်သင့်လမ်းမပေါ်တွင်ဘုန်းအသရေကိုဦးတည်ချီတက်အဖြစ်အိပ်မက်လိဂ်အွန်လိုင်းနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားအပေါ်ယူပါ!
ယခုအခမဲ့အိပ်မက်လိဂ်ဘောလုံး 2019 Download လုပ်!
* တက်ဘလက်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်! *
သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွင် TEAM Manage
သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်ရေးအဖွဲ့ကိုဖန်တီးရန်ထိုကဲ့သို့သောဂါရတ်ဘေးလ်များအဖြစ်ထိပ်တန်းစူပါစတားကစားသမားမှတ်ပုံတင်ရန်! , သင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏စတိုင်စုံလင်ခြင်းနှင့်သင်ဂုဏ်သိက္ခာ Elite တိုင်းထိပ်ဆုံး6လိခ်မှတဆင့်မြင့်တက်အဖြစ်သင့်လမ်းအတွက်ရပ်တည်သူကိုမဆိုအသင်းကိုအပေါ်ယူပါ။ သင်ကယူသောအရာကိုတယ်ရှိပါသလား?
လက်တွေ့ NEW Gameplay
စိန်ခေါ်မှုနှင့်အစွဲလမ်းအတွေ့အကြုံကိုဖွဲ့စည်းရန်မတ်, နည်းဗျူဟာ AI အဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။ အားလုံးအသစ်ကပုံရိပ်ယောင်များ, လက်တွေ့ Animation နဲ့ပြောင်းလဲနေသောဂိမ်း 60fps (သဟဇာတ devices များသာ) နှင့်အတူအိပ်မက်လိဂ်ဘောလုံး 2019 လှပတဲ့ဂိမ်းစစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရဖမ်းယူသောစုံလငျခွငျးဘောလုံးအထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Dream လိဂ်အွန်လိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်အကောင်းဆုံးဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့အိပ်မက်ထဲကရေးအဖွဲ့တတ်၏။ သင့်ရဲ့အဖွဲ့ သာ. ကွီးမွတျသကျသပွေဖို့ရာထူးအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအလုပ်လုပ်! အသစ်စက်စက်ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များကွဲပြားခြားနားသောပြိုင်ပွဲကို formats တစ်ခုခင်းကျင်းမှာအကောင်းဆုံးဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ငျး။ ထူးခြားသောဆုနှင့်ဆုတံဆိပ်အနိုင်ရအောင်ပွဲဆိုကြသည်။
• FIFPro ™လိုင်စင်ရကစားသမားသင်၏လက်မှအများဆုံးစစ်မှန်အိပ်မက်လိဂ်ဘောလုံးအတွေ့အကြုံကိုဆောင်တတ်၏,
•သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်ရေးအဖွဲ့ဖန်တီး customize နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်လွတ်မြောက်ရေး!
နှင့်7ဖလားပြိုင်ပွဲကျော်အားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအလုပ်လုပ်•6ရုံးခွဲများ!
• Google မှထိပ်ပေါ်မှာအများဆုံးသူကိုကြည့်ဖို့အောင်မြင်မှုများ & ဦးဆောင် Play!
•သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများ & အမှတ်တံဆိပ် Customize နှင့်တင်သွင်း!
Google နဲ့ devices များအကြား Sync ကိုတိုးတက်မှု• Cloud ကို Play!
•အလောနိတျမွို့ပြည်နယ်ပေးသီးသန့်တေးသံ, နေဝင်ချိန်သားဗေ Thornton, ဂျက်, Vista & သာလျှင်ကဗျာဆရာဆွတ်ခူး!
* ဒီဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာနှင့် In-ဂိမ်းပစ္စည်းများအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
* ဒီ app ဂိမ်းအကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ကို Wi-Fi သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဒေတာ (မရရှိနိုင်လျှင်) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ သငျသညျက Settings / မိုဘိုင်းဒေတာအတွင်းထဲကနေဒီဂိမ်းအပေါ်မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုမှုကို disable နိုင်ပါတယ်။
* ဒီ app တတိယပါတီကြော်ငြာပါရှိသည်။ သငျသညျဆိုင်ကနေဂိမ်းငွေကြေးအတွက်ဝယ်ယူလျှင် Advertising ကြော်ငြာကိုပိတ်ထားသည်။
အမေရိကန် Visits: firsttouchgames.com
facebook.com/dreamleaguesoccer: အမေရိကန် LIKE
twitter.com/firsttouchgames: Us Follow
Dream League Soccer 2019 အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Dream League Soccer 2019 အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Dream League Soccer 2019 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
moreitagames စတိုး 271 165.5k
Dream League Soccer 2019 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Dream League Soccer 2019 အခ်က္အလက္
Release date: 2018-11-20 02:13:06
Dream League Soccer 2019 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ